အမေရိကန်နိုင်ငံက အီရတ်နိုင်ငံရှိ စစ်ဆင်ရေးမစ်ရှင်ကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အဆုံးသတ်မည် - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ ဇူလိုင် ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အီရတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ကူညီ လေ့ကျင့်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစဉ် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စစ်ဆင်ရေးမစ်ရှင်ကို အဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က ဇူလိုင် ၂၆ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။“အီရတ်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ လေ့ကျင့်ဖို့၊ အကူအညီပေးဖို့၊ ကူညီဖို့နဲ့ ISIS (Islamic State) တွေကိုကိုင်တွယ်ဖို့ ဒီနှစ်ကုန်အထိ တိုက်ခိုက်ရေးမစ်ရှင်ကို ဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာပါ” ဟု ဘိုင်ဒန်က အီရတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mustafa al-Kadhimi နှင့် ဘဲဥပုံရုံးခန်း၌ တွေ့ဆုံပွဲအစပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အဆင့်သစ်ကို ရွှေ့ပြောင်းပြီးတာတောင်မှ အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်စစ်ဆင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဘဂ္ဂဒတ်တွင် နိုင်ငံအတွင်း အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တည်ရှိမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြမှု၌ ပါဝင်နေသူများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Al-Kadhimi က အမေရိကန် ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ Associated Press ကို ပြောကြားခဲ့ရာတွင် မည်သည့်ပြည်ပတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုများမဆို အီရတ်နိုင်ငံ၌ ရှိနေရန် မလိုအပ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့က အီရတ်မှာ အမေရိကန် တည်ရှိမှုကနေ ဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို လေ့ကျင့်ရေးပံ့ပိုးဖို့၊ သူတို့ရဲ့ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ လုံခြုံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ တိုးတက်မှုရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် အီရတ်နိုင်ငံ၌ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂,၅၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း၊ ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် အီရတ်နိုင်ငံတွင် အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင် အရေအတွက် မည်မျှထားရှိမည်ဆိုသည်ကိုမူ အိမ်ဖြူတော်က ဇူလိုင် ၂၆ ရက်၌ ငြင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အပြောင်းအလဲသည် အီရတ်နိုင်ငံ၌ အမေရိကန် စစ်တပ်တည်ရှိမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချစေမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းအမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အီရတ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၈ နှစ်အကြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အီရတ်မှ ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Islamic State စစ်သွေးကြွများအား တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အီရတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ကူညီ ပံ့ပိုးရန် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အီရန်နိုင်ငံ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကက်ဆမ် ဆိုလီမန်နီ (Qassem Soleimani) နှင့် အီရန် စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင် အဗ္ဗူမာဒီ အယ်လ်-မူဟန်ဒီ (Abu Mahdi al-Muhandis) တို့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလက ဘဂ္ဂဒတ်လေဆိပ်တွင် အမေရိကန် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် များမကြာမီတွင် အီရတ်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံခြားတပ်ဖွဲ့များ တည်ရှိမှုကို အဆုံးသတ်ရေး အစိုးရ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ကို အီရတ် ပါလီမန်က ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အီရတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်း အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တည်ရှိရာ အီရတ်စစ်တပ် အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဘဂ္ဂဒတ်မြို့ရှိ အစိမ်းရောင်ဇုန်ရှိ အမေရိကန် သံရုံးနေရာများအား အီရန် ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ရှီယိုက်စစ်သွေးကြွများမှ ဒုံးကျည်၊ ဒရုန်းများဖြင့် မကြာခဏ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်လေ့ရှိသည်။
အမေရိကန် စစ်တပ်ကလည်း ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် ဇွန်လ၌ ဆီးရီးယားနှင့် အီရတ် နိုင်ငံများရှိ ရှီယိုက်စစ်သွေးကြွများအား တန်ပြန်လေကြောင်းတိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလ အစောပိုင်းကလည်း အီရတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း အန်ဘာပြည်နယ်ရှိ အမေရိကန် ဦးဆောင်သည့် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ တည်ရှိရာ အယ်လ်-အာဆတ် လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းအား ဒုံးကျည် ၁၄ လုံးကျော် ထိမှန်ခဲ့ရာ လူ ၂ ဦး ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, July 26 (Xinhua) — President Joe Biden said on Monday that U.S. forces in Iraq will end the combat mission by the end of the year while continuing to train and assist Iraqi forces.
“Our role in Iraq will be … continue to train, to assist, to help and to deal with ISIS (Islamic State) by the end of the year, inacombat mission,” Biden said at the beginning ofameeting in the Oval Office with Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi.
Earlier this month, up to 14 rockets hit Al-Assad Air Base housing U.S.-led coalition forces in Iraq’s western province of Anbar, causing two minor injuries. ■
1- Combo photo of U.S. President Joe Biden (L) and Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi. (Xinhua)
2- Iraqi protesters take part inademonstration against the presence of U.S. troops in the country, in Baghdad, capital of Iraq, Jan. 24, 2020. (Xinhua/Khalil Dawood)